यी ४० बर्षिया आन्टीलाई घुम्न जानी, फोनमा बोल्ने केटा साथि चाहियो कोही छ ? -
Home मनोरन्जन यी ४० बर्षिया आन्टीलाई घुम्न जानी, फोनमा बोल्ने केटा साथि चाहियो कोही...
यी ४० बर्षिया आन्टीलाई घुम्न जानी, फोनमा बोल्ने केटा साथि चाहियो कोही छ ?
ई छोराकी आमा भर्खर जुँगाको रेखी बसेको तन्नेरीसँग चक्कर चलाउँछिन्। कुनै ४० वर्षकी महिला २० वर्षको युवासँग रोमान्स गर्छिन्। यस्तो सम्बन्धको नियत के हुन्छ रु अर्थात्त्र हो तरु श्रीमान् विदेशमा हुने, श्रीमान्को माया नपाउने, असन्तुष्ट र कुण्ठित महिलाहरूले यस्तो सम्बन्ध राखेको पाइएको छ। उता तन्नेरीहरूका आफ्नै कथा छन्।